Momba anay - Kunshan Qiangdi Grinding Equipment Co., Ltd.
Kunshan Qiangdi Grinding Equipment Co., Ltd.. dia orinasa manana haitao matihanina matihanina miasa amin'ny R&D, famokarana sy varotra. Izay misy ao amin'ny faritr'i Jiangnan tsara tarehy 一 Youde Road ， High 一 Tech Zone, Kunshan City, Jiangsu Province. Manompo an-tsitrapo hatrany ny mpanjifanay hatrany izahay. ary manantitrantitra ny fitsipika "Quality First, Miezaha ho an'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana" hanome vahaolana ankapobeny ho an'ny mpanjifa manana kalitao.
Izahay dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana fitaovana avo lenta vovoka, ny vokatra lehibe dia ahitana milina jet-bed-bed, karazana disc jet supersonika jet, jet ultrafine pulverizer, classifier-n'ny rivotra, fanafody famokarana jet-n'ny pharmaceutika sy sakafo any ambanin'ny fitakiana GMP / FDA, pesticides momba ny tontolo iainana manan-tsaina mitoto volo & fampifangaroana rafitra sy ny rafitra jet pulverizing jet proof-explosion, rafitra vovoka enviromental ary Vertical Wet stirring Mill.
Ahoana no ataontsika?
Manompo an-tsitrapo hatrany ny mpanjifanay hatrany izahay. ary manantitrantitra ny fitsipika "Quality First, Miezaha ho an'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana" hanome vahaolana ankapobeny ho an'ny mpanjifa manana kalitao.